AMISOM Oo Maciin Bidday Qorashada Maleeshiyo Beeleed Hubeysan Si Ay Ugula Dagaallanto Al Shabaab. – Shabakadda Amiirnuur
March 31, 2018 5:53 pm by admin Views: 68
Kadib markii ciidamada gumeysiga Kenya iyo kuwa Itoobiya ku fashilmeen duullaanka ay ku qaadeen gobollada Jubbooyinka ayay dhinacyadaasi cadowga ah waxay sheegeen in ay qaab cusub u wajahayaan dagaalka ka dhanka ah muslimiinta.
Taliska ciidamada AMISOM ayaa sheegay in ay bilaabayaan qorista maleeshiyo beeleedyo ay carra tuur uga dhigtaan weerarada uga yimaad ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Marti Abiili oo ah xiriiriyaha ciidamada AMISOM iyo maamulka Axmed Madoobe ee Jubbalan isku magacaabay ayaa sheegay in ay diiwaan galinayaan illaa 5,000 (shan kun) oo katirsan maleeshiyaadka Gobollada Gedo,Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Sarkaalkan u hadlay ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa intaasi ku daray in mashruucani oo ay iska kaashanayaan Ururka Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay uu yahay mid loogu talagalay xoojinta maamulka fadhiidka ah ee kajira magaalada Kismaayo kaasi oo sanadadii lasoo dhaafay ku tiirsanaa ciidamada Xabashida itoobiya iyo kuwa Kenya.
Warkan kasoo yeeray Taliska AMISOM ayaa imaanaya waqti xarakada Al Shabaab ay si adag uga hortagtay duullaanno ay ciidamo huwan ah iyo Maleeshiyaad Soomaali ah ku qaadeen deegaanno dhaca duleedka magaalada Kismaayo.
Tobanaan Maleeshiyaad ah oo Maamulka Axmed uu qortay ayaa bilihii lasoo dhaafay si hal haleel ah isaga dhiibay degmada Jilib iyadoona wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ay dajisay qorshe lagusoo dhoweynayo maleeshiyaadka baxsadka ah.
Kumanaan ciidamo Kenyaan iyo itoobiyaan ah oo dhanka cirka iyo tababarka ay ka taageerayaan saraakiil caddaan Mareykan ah ayaaduullaan ku jooga Jubbada Hoose waxayna ciidamadaasi wajayaan weeraro joogta noqday oo uga imaanaya Shabaabul Mujaahidiin.
Isku daygan la doonayo in maleeshiyo beeleed loogu qoro maamulka ‘Jubbaland’ ayay falanaqeeyayaashu ku sheegayaan maah maahdii soomaaliyeed ee aheyd Waa soca weynee aan orodno, sababtoo Al Shabaab iyo qabaa’illada soomaalida waxaa ka dhaxeeya isgaashaan buursi ku aaddan ladagaallanka gumeystayaasha soo duulay.
Arrinta kale ee waaqicu diidayo ayaa ah dhulka ay tahay in maleeshiyaadka laga qoro waxaa kajira maamullo islaami ah suurtagalna ma ahan in qabaa’illada ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka ay dhanka dhanka shisheeyaha kasoo jeestaan.